Interview मा कुराकानी गर्न सिक्नु
आफ्नो बारेमा केही भन्नुहोस्
म एउटा असाध्यै मेहनती र समर्पित व्यक्ति हूँ. मलाई बिक्री र बजारमा धेरै अनुभव छ. मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि असाध्यै मजबूत छ. म सधैं पढ़ाईमा राम्रो थिए. मेरो रुचिको क्षेत्र बिक्री, बजार, र ग्राहक सहायता हो.
Tell me something about yourself = आफ्नो बारेमा केही भन्नुहोस्.
जब यो प्रश्न सोधिन्छ, तब कोशिश गर्नु कि आफ्नो CV बाहेक केही नयाँ भन्नु. प्राय: जसो यो प्रश्नको उत्तरमा तपाईलाई आफ्नो नाम फेरी भन्नु आवश्यकता हुँदैन. यस प्रश्नमा यो भन्ने कोशिश गर्नु कि तपाई जागिरका लायक किन हुनु हुन्छ.
के 'Myself Pankaj' नाम भन्ने सही तरीका हो? ऑडियो सुनेर सही ऑप्शन छनौट गर्नुहोस्
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
'मेरो विशेषज्ञता को क्षेत्रहरुमा बिक्री र मार्केटिंग समावेश छन्. ' को अंग्रेज़ी मा अनुवादको चयन गर्नुहोस्.; अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्
म लेखनलाई लिएर असाध्यै जोसिलो छु.
उपयुक्त शब्दहरू को सही क्रम मा चयन गर्नुहोस्
म सित ग्राहक सेवा मा तीन वर्सको अनुभव छ.
म पोखराबाट हूं, तर काठमाण्डौंमा बस्दै आइरहेको छु.
आफ्नो बारे केही भन्नुहोस्
I am originally from Pokhara but have been living in Kathmandu since 2001. I am very passionate about banking. I have several years of experience in banking and insurance. I am very dedicated and loyal.
म मूल रूपमा पोखराबाट हूं, तर 2001 देखी काठमाण्डौंमा बस्दै आइरहेको छु. म बैंकिंका लागि धेरै जोसिलो छु. मलाई बैंकिंग र इनश्योरेन्समा केही वर्षको अनुभव छ. म धेरै समर्पित र वफादार छु.
तपाई यो जागिर किन चाहनु हुन्छ?
म शिक्षा क्षेत्रमा धेरै जोसिलो छु. मलाई वास्तवमा यस क्षेत्रमा तपाईंको कम्पनी जे गरिराछ त्यो मन परेको छ. म सधैं तपाईको जस्तै बढ्दै गरेको कम्पनीको लागि काम गर्न चाहन्थे. मलाई लाग्छ कि म यहाँ धेरै सिक्नसक्छु.
'मलाई लाग्छ कि म यहाँ धेरै सिक्नसक्छु.' को अंग्रेज़ी मा अनुवादको चयन गर्नुहोस्.; अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्
तपाई रियल एस्टेटको क्षेत्रमा जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मलाई मन परेको छ.
म सधैं एउटा मल्टी नेशनल कम्पनी मा काम गर्न चाहन्थे.
हामीले तिम्रो नियुक्ति किन गर्ने?
मलाई लाग्छ कि बिक्रीको क्षेत्रमा मेरो विशेषज्ञता तपाईको कम्पनीको लागि मलाई योग्य बनाउछ. यस बाहेक, म आईटी क्षेत्र को बारेमा धेरै जोसिलो छु. म तपाईको कम्पनीको संस्कृतिमा पनि उपयुक्त हुन्छु. यस भन्दा अगाडि पनि मैले बिक्री टीमहरुको नेतृत्व गरेको छु त्यसैले म एउटा बिक्री प्रबंधकको पदको लागि योग्य हुनेछु.
'मेरो विशेषज्ञता तपाईको कम्पनीको लागि मलाई योग्य बनाउछ.' को अंग्रेज़ी मा अनुवादको चयन गर्नुहोस्.; अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
आफुलाई सबभन्दा मनपरेको hero heroine बारे कुराकानी